Bruno Fernandes oo weerar afka ku qaaday xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Nemanja Matic… (Sidee wax u jiraan?) – Gool FM
(Manchester) 31 Maajo 2020. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United, Bruno Fernandes ayaa weerar afka ah ku qaaday xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Nemanja Matic.
Bruno ayaa bishii Janaayo Man United kaga soo dhaqaaqay Kooxda Sporting Lisbon, waxaana uu xiddigaha kooxdiisa dib ugula soo laabtay todobaadkii hore, kaddib muddo ka badan labo bilood oo ciyaaraha looga maqnaa caabuqa Coronavirus.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa waqti yar oo kooban u haysta inuu xiddigihiisa u diyaariyo inay u dagaalamaan booska ay kaga qeyb-galayaan tartanka Champions League kal ciyaareedka dambe, iyadoo hankoodu uu yahay inay ugu yaraan soo qabtaan Chelsea oo saddex dhibcood ka sarreysa.
25-sano jirkaan Fernandes waxa ay si dhow u wada shaqeynayeen Matic muddadii la soo laabtay iyo ka hor mudadii aan ciyaaraha la joojin labadaba, balse haatan waxa ay labada xiddig haatan isku weerareen baraha bulshada.
Waxaa markii hore gardarada lahaa Nemanja Matic, maxaa yeelay horraantii isbuucaan ayuu isku dayey inuu ku maadeysto Bruno, isagoo isbarbar-dhig ku sameeyey xilligii uu Fernandes joogay kooxdiisii hore ee Sporting Lisbon iyo waqtigii uu Matic qudhiisu joogay naadiga reer Portugal ee Benfica.
Labadan kooxood ee reer Portugal oo ah kuwan ugu guulaha badan dalkaasi ayaa xilli ciyaareedkan waxaa gacanta sare yeelatay Benfica oo 17 dhibcood oo nadiif ah ka sarraysa Sporting, waana sababta keentay in Matic uu isku dayo inuu uga maadsado Fernandes.
Nemanja Matic oo gacmihiisa kala bixinaya xilli uu samaynayay tababar baaskiil oo uu ku jimicsanayay ayaa inta gacmihiisa kala bixiyey uu yiri: “Mar walba farqi ayaa u dhexeeya Benfica iyo Sporting.”
Bruno Fernandes oo hadalkaasi uu gubay ayaa meel dhigtay, waxaana uu sugay fursaddiisa, isagoo soo xusuustay markii macallin Solskjaer uu xiddigaha Man United u kala saaray labo dhinac oo tababarka isaga soo horjeeda.
Markaas macallin Ole waxa uu Fernandes dhiniciisa la raaciyey Scott McTominay, Angel Gomez, Luke Shaw, Mason Greenwood, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka iyo Odion Ighalo, waxaana guusha heshay dhinaca Bruno Fernandes.
Markii ay ciyaartu soo dhammaatay Bruno Fernandes ayaa isagoo adeegsanaya bartiisa Instagram-ka waxa uu bilaabay inuu kaga aar-goosto Matic, waxaanu ku soo qoray: “Nemanja Matic, mar walba farqi ayaa u dhexeeya kooxda guuleysanaysa iyo Naadiga.”
Si kastaba ha noqoteen wargeysyada ciyaaraha ka faallooda qaarkood ayaa arrintaan falanqeyn ku sameeyey waxaana ay sheegeen inay ahayd kaftan, isla markaana waxa ay caddeeyeen in labada ciyaaryahan uu ka dhexeeyo xiriir saaxiibtinnimo oo xooggan.